Codsiga magangelyo ee muwaadiniinta Kiribati qaxooti ahaan loo diiday |
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Codsiga magangelyo ee muwaadiniinta Kiribati qaxooti ahaan isbeddelka cimilada waa la diiday
Codsiga magangelyo ee muwaadiniinta Kiribati qaxooti ahaan isbeddelka cimilada waa la diiday
Ioane Teitiota, oo 37 jir ah, ayaa sheegay in uu isku dayayay in uu ka baxsado kor u kaca badaha iyo khataraha deegaanka ee ka dhashay kulaylka caalamiga ah ee dalkiisa hooyo ee Kiribati.
Kiribati, oo si rasmi ah u ah Jamhuuriyadda Kiribati, waa waddan jasiirad ah oo ku yaal badhtamaha kulaalayaasha Badweynta Baasifigga. Dadka joogtada ahi waxa ay ka badan yihiin 100,000 oo ku nool 800 kiiloo mitir oo laba jibbaaran.
Laakiin maxkamada sare ee New Zealand ee Auckland ayaa xukuntay in sheegashadiisu ay ka hoos martay shuruudaha sharciga ah, sida cabsida cadaadis ama khataro naftiisa ah.
Garsoore John Priestly waxa uu ugu yeedhay sheeko cusub balse waa la marin habaabiyay, waxana uu taageeray go'aankii asalka ahaa ee maxkamada socdaalka.
"Markii uu ku soo laabtay Kiribati, uma soo degi doono xadgudub joogto ah oo nidaamsan oo ka dhan ah xuquuqdiisa aasaasiga ah ee bini'aadmiga sida xaqa nolosha… ama xaqa uu u leeyahay cunto, dhar iyo guri ku filan," Priestley ayaa ku qoray xukunkiisa.
Teitiota oo dalka New Zealand soo galay sannadkii 2007-dii oo saddex carruur ah u dhashay ayaa hadda wajahaya in la masaafuriyo haddii aanu racfaan ka qaadan maxkamad sare.
Qareenka Teitiota, oo aan diyaar u ahayn inuu faallo ka bixiyo, ayaa ku dooday in sharciyada qaxootiga ee New Zealand ay duugoobeen.
Sheegashada aqoonsiga qaxoontigu waxay qeexday sida mowjadu u jabiyeen derbiyada badda iyo kor u kaca heerarka baddu ay u wasakheeyeen biyaha la cabbo, dila dalagyada iyo daadadku guryaha.
Jasiiradda yar ee Koonfurta Baasifigga ee Kiribati waxa ku nool in ka badan 100,000, laakiin dhererkeedu celcelis ahaan 2 mitir. (6-1/2 ft) oo ka sarreysa heerka badda ayaa ka dhigaysa mid ka mid ah waddamada ugu nugul biyaha kor u kacaya iyo saameynta isbeddelka cimilada kale.
New Zealand iyo Australia, oo ah labada waddan ee ugu horumarsan Koonfurta Baasifigga, ayaa iska caabiyay baaqyo ah in wax laga beddelo xeerarka socdaalka si loogu hiiliyo dadka Baasifigga ee ku barakacay isbeddelka cimilada.
Kiribati, oo qayb ka ah gumaystihii Ingiriiska ee Gilbert iyo Ellice Islands, waxa ay ka kooban tahay 32 atolls iyo jasiirad shacbi ah, oo ku xidha dhulbaraha kala badh u dhexeeya Australia iyo Hawaii kuna fiday in ka badan 3.5 milyan sq km (2 milyan oo mayl laba jibaaran) oo badweyn ah.
Waxa ay iibsatay dhul ku yaala Fiji si ay cunto ugu beerto oo ay u dhisto goob dib u dejin loogu samayn karo dadka ka soo barakacay badaha. Waxa ay isku dayaysaa in ay dadkeeda siiso xirfado ay ku soo jiidan karaan soo galooti ahaan, hab ay ugu yeerto "guurka si sharaf leh".
Etihad Airways waxay GM cusub u magacawday Seychelles
Ruushka: Suuqa safarka dibadda ee labaad ee ugu dhaqsaha badan adduunka
Suuqa Qalabaynta Qalabaynta 2022 Ciyaartoyda Muhiimka ah...
Gardarada Ruushka ee Ukraine waxay dhaawici doontaa Yurub...
Ukrain, Maxay Kuu Raacayaan?
Kooxda IMEX iyo Messe Frankfurt waxay kordhiyeen iskaashigooda